Kalfadhiga 2aad ee Baarlamaanka Galmudug oo furmay | KEYDMEDIA ONLINE
DHUUSAMAREEB - Baarlamaanka Galmudug ayaa yeeshay fadhigii ugu horeeyay kadib mudo ka badan labo bilood oo Xildhibaanada ay fasax ku jireen, iyadoo gudoomiyaha Gollaha Maxamed Nuur Gacal uu sheegay in shaqadooda ay dib ugu soo laabteen.
Kulanka Maanta oo ka dhacay Xarunta Baarlamaanka ee Dhuusamareeb ayaa waxaa ka qeybgalay dhamaan Xildhibaanada iyo Gudoonka, iyadoo looga hadlay xaaladda Galmudug dhinac siyaasadda iyo isbedellada socda, ee Qoor Qoor uu wado.
Dhinac kale, Xildhibaan la hadlay Keydmedia Online ayaa sheegay in la xaliyay khilaaf ka dhex jiray Baarlamaanka, kaasoo salka ku hayay Mooshin xilka qaadis ah oo laga soo gudbiyay gudoomiyaha, oo lagu eedeeyay inuu mushaarka Xildhibaanada u isticaamalay dano gaar ah, sida inuu xafiiskiisa ku qalabaystay.
Mooshinka ayaa la joojiyay kadib markii ay soo farageliyeen Madaxweyne ku xigeenka iyo Mas'uuliyiin kale, oo ku qanciyyay Xildhibaanada inay heli doonaan Mushaarkooda ka maqan, waxaana looga baaqay inaysan xiisad siyaasadeed abuurin.
0 Comments Topics: dhuusamareeb galmudug qoor qoor